The iPriest: Maazi Jack Ma ekweela nkwa inyere Afrika aka na-ichu ọria mgbu Coronavirus
Maazi Jack Ma ekweela nkwa inyere Afrika aka na-ichu ọria mgbu Coronavirus
Nwa okorobia onye Chaina a ma ama bu Jack Ma ekweela nkwa inyere mba nile di n’Afrika aka n’agha nke uwa nile na-alusi ọria di njọ nke a na-akpọ Coronavirus, Covid19 na mkpobi. Maazi Jack Ma bu nwoke nwere nnukwu akụ na ụba kwuru nke a na ozi o depụtara na akara Tuwita ya bu @JackMa.
O kwuru si “anyi agaghi eme ka anyi amaghi na mmiri a n’erụ n’igwe ga-emecha zuo n’Afrika. Onweghi ihe ga-eme ka ndi Afrika nile gbalaa nsogbu a na-abia. Uwa nile agaghi achisia aka chere ka ọria Covid19 kpọọ agwa ọjọ n’Afrika.
Anyi ga-eke nkwucha diri nkwadebe tụpụ o mee, ka Afrika nwee ike ikete oke na njiri mara na mmụta nke ndi mba ọzọ ọria Covid19 metụtara na mbụ.”
Iji mee ka ebumnuche ndi ahụ mezuo, ndi otu Jack Ma Foundation na Alibaba Foundation ga-enye mba 54 di n’Afrika 20,000 ngwa nnwale, 100,000 okpu mkpuchi ọnụ, na 1,000 efe ndi ọrụ ahụike.
O kwuru na ha ga-ezidata ngwa ọrụ ndi a na mba Etiopia ebe onye isiala mba ahụ kwere nkwa na mba ndi ozo ga-enweta ya.
Posted by The iPriest at 4:44:00 pm